ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ဇနီး – Cele Top Stars
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ဦးအောင်ပိုင်ရဲ့ဇနီး
November 21, 2021 By admin2Celebrity
ချစ်ပရ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာ အောင်မြင်မှုတစ်နေရာကို ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်တင် မင်းသားအောင်ပိုင် ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်. အောင်ပိုင်ကတော့ အနုပညာအရည်အချင်းပြည့်ဝသူ ဖြစ်တာကြောင့် ခုချိန်ထိပရိသတ်တွေက မမေ့လျော့ပဲ မှတ်မိနေကြသေးတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သရုပ်ဆောင်သီဟတင်စိုးနှင့်လည်း အတွဲဖက်ညီညီသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်…၊
သူဟာသရုပ်ဆောင်တာ အရမ်းပီပင်ပြီးတော်လှန်ရေးဇတ်ကားများစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တုန်းကတော့ အောင်ပိုင် တစ်ယောက်လူ့လောကကြီးကို နုတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်သွားကြောင့် အောင်ပိုင့်ကိုချစ်‌ကြတဲ့ ပရိသတ်များနဲ့ မိတ်ဆွေများလည်း ဝမ်းနည်းခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ အောင်ပိုင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ချိူချိူသန်းက ” အောင်ပိုင်ကတော့ အရက်တွေအလွန်အကျွံသောက်တာကြောင့် အသဲမကောင်းတော့ဘဲ ကျောက်ကပ်ပါ ပျက်စီးပြီးသေဆုံးသွားတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်နော်…
ခဈြပရျသတျကွီးရေ မွနျမာဇာတျလမျးတှမှော အောငျမွငျမှုတဈနရောကို ရယူထားနိုငျခဲ့တဲ့ ဖိုငျတငျ မငျးသားအောငျပိုငျ ကိုတော့ လူတိုငျးသိကွမယျထငျပါတယျနျော. အောငျပိုငျကတော့ အနုပညာအရညျအခငျြးပွညျ့ဝသူ ဖွဈတာကွောငျ့ ခုခြိနျထိပရိသတျတှကေ မမလြေ့ော့ပဲ မှတျမိနကွေသေးတာ ဖွဈပါတယျနျော.. သရုပျဆောငျသီဟတငျစိုးနှငျ့လညျး အတှဲဖကျညီညီသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါတယျ…၊
သူဟာသရုပျဆောငျတာ အရမျးပီပငျပွီးတျောလှနျရေးဇတျကားမြားစှာပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ရကျတုနျးကတော့ အောငျပိုငျ တဈယောကျလူ့လောကကွီးကို နုတျဆကျသှားပွီဖွဈသှားကွောငျ့ အောငျပိုငျ့ကိုခဈြ‌ကွတဲ့ ပရိသတျမြားနဲ့ မိတျဆှမြေားလညျး ဝမျးနညျးခဲ့ကွရတာ ဖွဈပါတယျနျော.. ဒီနလေ့ေးမှာတော့ အောငျပိုငျ့ ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါခြိူခြိူသနျးက ” အောငျပိုငျကတော့ အရကျတှအေလှနျအကြှံသောကျတာကွောငျ့ အသဲမကောငျးတော့ဘဲ ကြောကျကပျပါ ပကျြစီးပွီးသဆေုံးသှားတာ ဖွဈကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျနျော…
သတိလဈပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့တဈခါတညျး သတိပွနျမလညျတော့ဘဲ အသကျပါ ပါသှားတဲ့အကွောငျးကိုလညျး စိတျမကောငျးစှာနဲ့ပွောပွာခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါ့အပွငျ အိမျထောငျသကျ၂၁ နှဈမှာ အရကျသောကျတာကလှဲလို့ ကနျြတာအိမျထောငျဦးစီးပီသခဲ့တဲ့ အကွောငျးစုံကိုလညျး ပွောထားပါသေးတယျ။ပရိသတျကွီးလညျး ကနျြရဈခဲ့တဲ့ဦးအောငျပိုငျရဲ့ မိသားစုကိုလညျး အားပေးစကားလေးတဈခုခုလောကျရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော..
သားလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို မိသားစုနဲ့ ရိုးရှင်းစွာကျင်းပခဲ့တဲ့ ရတနာခင်